Muxuu yahay khilaafka hortaagan doorashada Somaliland? - BBC News Somali
Muxuu yahay khilaafka hortaagan doorashada Somaliland?
Muranka doorashada ayaa wali taagan, xalna looma hayo
Muranka dhanka doorashada golaha wakiilada ee u dhexeeya xisbiyada Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa sii xoogaysanaya.
Doorashada golayaasha wakiilada iyo ta kuwa deegaankuba dhowr goor oo hore ayay dib u dhacday.
Xildhibaanada aqalka baarlamaanka imika fadhiya waxaa markii u horaysay cod shacab lagu doortay sannadkii 2005-tii.
Waxaa loo doortay in shan sanno ay shaqeeyaan kadibna gole kale lasoo doorto.
Taas macneheedu waa in waqtiga xilkoodu uu ku ekaa sannadkii 2010-kii.
Sagaal sannadood oo dheeraad ah ayay kusii fadhiyaan kuraasta iyada oo dhowr goor muddo kordhin loo sameeyay, markii ay qabsoomi waayeen doorashooyinkii lagu soo dooran lahaa xildhibaannadii beddeli lahaa.
Markii golaha guurtidu uu samaynayay muddo kordhintii u danbeysay ayay sidoo kale cayimeen xilliga doorashada golahan lagu beddelayo la qabanayo oo ay sheegeen in ay dhicidoonto 13-ka bisha Disembar ee sanadkan.
Hase ahaatee arrinta uu imikana muranku ka taaganyahay waa doorashadaasi in ay qabsoomi karto iyo in kale.
Maxay tahay sababta doorashada soo socota looga cabsi qabo in qabsoomi waydo?
1- Mas'uuliyiinta xisbiga waddani waxa ay horay u sheegeen in aanay ku kalsoonayn guddiga doorashooyinka, waxaana ay dalbadeen in laka diro, taas oo keeni karta in doorashadu wakhtigeedii dib uga dhacdo inta guddi kale oo lasoo xulaa u diyaar garoobayo qabashada doorasho,taas oo qaadan karta dhowr bilood.
2- Xubnaha guddiga doorashooyinku waxa ay ka kooban yihiin toddoba xubnood oo ay soo kala xushaan
Guurtida - 2 xubnood
Madaxweynaha- 2 xubnood
Sadexda xisbi oo min hal xubin ah
Xisbiga mucaaradka ah ee waddani waxa uu dalbanayaa in todobada xubnood ee guddiga la kordhiyo oo laga dhigo sagaal xubnood, isla markaana labada xubnood ee cusub lagu daro xubnaha ay xisbiyada mucaaradka ahi soo xulayaan.
3- ilaa imika waxa hor-yaalla xeerkii doorashooyinka golaha wakiilada oo aan dhamaystirnayn.
Sababaha xeerkan hortaagan waxaa kamid ah beelaha qaar oo tirsanaya in aanay haysan saamigii xildhibaanada golahan ee ay xaqa u lahaayeen, waxaana beelahaasi ay dalbanayaa in dib loogu noqdo qaabka loo qaysado xubnaha golahan.
Waxaase jirta in beel kastaa aaminsan tahay in tiradii xubnaha ee ay mudnayd aanay helin.
Arrintaas waxaa xal iyana u noqon karta kaliya diwaan galin guud oo lagu sameeyo dhamaan bulshada ku kala nool gobolada Somaliland, taasina waa mid kale oo sii horseedi karta dibudhac kale oo doorashada ku yimaadda.
Dhowr goor ayay xisbiyada siyaasaddu shirar maalmo badan qaatay ka yeesheen sidii ay arrimahan xal ugu heli lahaayeen, markastana waa lagu kala kacaa iyada oo aan waxba la isku afgaran.
Safiirro ka kala socda wadamada Yurub, gaar ahaan kuwa Somaliland ka taageera dhanka dhaqaalaha ku baxa doorashooyinka ayaa dhowr goor u yimid Hargeysa in ay xal ka dhex dhaliyaan dhinacyada murankani ka dhexeeyo.
Balse walise xaalku waa halkiisii.
TOOS Wasiirka Amniga Soomaaliya oo Twitter-kiisa si lama filaan ah ugu faafiyay hadal lagu weerarayo Turkiga
Ninka xaaskiisa u dhisay guri u eg Taj Mahal si uu jacaylkiisa ugu muujiyo
Ma jiraan cuntooyin sare u qaadi karo hammada?
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 11 Luulyo 2019
Maxbuuska isaga oo jeelka ku jira abaalmarinta caalamiga ah ku guulaystay